Abshir Bukhaari oo si kulul uga hadlay hadalkii Wasiir Goodax baaqna u diray Xukuumadda – XAMAR POST
Abshir Bukhaari oo si kulul uga hadlay hadalkii Wasiir Goodax baaqna u diray Xukuumadda
Guddoomiye kuxigeenka koobaad ee Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Mudane Sanoter Abshir Bukhaari ayaa su’aal kulul ka keenay hadalkii Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi goodax Barre eek u saabsanaa in Puntland diiday ka qeybgalka Imtixaanka ay qaado dowladda.
Sanoter Abshir Bukhaari ayaa sheegay in Puntland xaq u leedahay inay si madax banaan u maamulato nidaamkeeda waxbarasho,isla markaana Dastuurka dalka uu dhigayo.
Aniga oo tixraacaya waajibka dastuuriga ee Aqalka Sare sida ku cad Qod. 71 ee Dastuurka Federaalka & waajibkeyga xilgudasho sida waafaqsan Qod. 61aad Faqradiisa 1,3 waxaan cadeynayaa in farriinta halkan ku lifaaqan ee wasiir Cabdulahi Godax ay ka soo horjeedo Dastuurkeena Qod. 54 ayuu yiri Sanoter Abshir Bukhaari.
Sidoo kale waxa uu sheegay in arrimaha waxbarashada dalka ay qeyb ka tahay arrimaha ay si gaar ah u maareysan karaan dowlad goboleedyada amaba uu wadaxaajoodku ka furan ,isla markaana Wasiirka waxbarashadu go’aan ku laheyn maareynta waxbarashada Puntland.
Geba-gabadii ayaa waxa uu ugu baaqay WXukuumadda Soomaaliya in uu ilaaliso heshiis federaal ah ay wada gaareen Xukuumadda dhexe iyo kuwa Dowlad Goboleedyada; isla markaana ay ka fogaato adeegsashada siyaasado aan laheyn sal sharci ah oo waxyeello gaarsiin kara nidaamka Federaalka.
Madaxweyne Farmaajo oo safar deg deg ah uga dhoofay Muqdisho